स्वास्थ्य /जिबनशैली – Online Nepal
Jan182021 by Raaz Lama adminNo Comments
काठमाडौँ । स्वास्थ्यको कुरा गर्दा खुट्टालाई हामी वेवास्ता गर्छौं। हामीलाई लाग्छ, खुट्टामा खास समस्या हुँदैन।तर, कतिपय अवस्थामा खुट्टाले समग्र शरीरको स्वास्थ्यबारे जनाउ दिन्छ। स्वास्थ्यमा कुनै गडबडी देखिए, त्यसले शरीरको रोगको संकेत गर्छ।कहिले काहिँ सामान्य समस्या आउन सक्छ, जो आफै ठिक हुन्छ। तर, सधै एकनास हुँदैन। कुनै बेला खुट्टामा त्यस्ता समस्या पैदा हुन्छ, जसले गंभिर रोगको संकेत गर्छ। के हुन् त ति संकेत ?खुट्टा झमझमाउनु-हाम्रो हात खुट्टा बेस्सरी झमझाउने गर्दछ । हातखुट्टा झमझमाउनु भनेको मधुमेह रोगको संकेत हो। सामान्यतयाः मधुमेहका विरामीलाई हातखुट्टा झमझमाउने तथा पोल्ने समस्या अक्सर हुने गर्दछ। खुट्टा झमझमाउने समस्या पेरिफेरल न्युरोपैथीको संकेत हो । र,मधुमेह रोग न्युरोपेथीको सामान्य कारण हो ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,, नङको आकारमा परिवर्तन आउनु-विभिन्न प्रकारका रोेगहरुमा नङ आकार
एजेन्सी । विगत ९ महिनादेखि विश्वलाई तनाव ग्रस्त पारेको नयाँ कोरोना भाइरसको लक्षण पत्ता लगाउन सुरुमा निकै गाह्रो भएको थियो । कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरुमा ज्वोरो आउनु, थकाइ लाग्नु, श्वास प्रस्वासमा कमि आउनु, कफ हुनु सामान्य लक्षण हो । तर, अनुसन्धानको क्रममा विज्ञहरुले कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरुमा मुखमा समेत खराबी हुने र यो कोरोना लक्षण समेत भएको स्पष्ट पारिएको छ । भाइरसको अनुसन्धानको क्रममा नयाँ लक्षण विज्ञहरुले पत्ता लगाएका हुन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ** लण्डनस्थीत रहेको किङ्स कलेजका एपिडेमोलोजीस्ट प्रा। टिम स्पेक्टरले नयाँ कोरोना भाइरसको लक्षणलाई सार्वजनिक गर्न सफल भएका छन् । यसमा कोरोना संक्रमणको लक्षण मुख खराब हुँदा पनि हुनसक्न जनाएका छन् । प्राय जसो संक्रमितमा मुखमा खराबी देखिएको, जिब्रोमा घाउँ आउने देखिने गर्दछ । यसलाई कोभिड टङ नामाकरण गरिएको छ । टिमले अनौठौ लक्षण यसल
मानिसको लागि अहिले हर्टअट्याक (प्राणघातक रोग) गम्भीर समस्या बनेको छ। हर्टअट्याक अचानक हुन्छ तर यो खराब लाइफ स्टाइल र खानपानको कारण हुन्छ। हर्टअट्याक आउनुको कुनै निर्धारित समय हुदैन। तर के तपाईलाई थाहा छ हर्टअट्याक बिहानको समयमा बाथरुममा धेरै हुन्छ। बाथरूममा हर्टअट्याक हुनुको धेरै कारण रहेको छ, यदि तपाईले यस बारेमा जानकारी पाउनुभयो भने आफु र आफ्नो परिवारलाई यसबाट सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। बिहानको समयमा बाथरूममा हर्टअट्याक किन आउँछ? र हर्टअट्याक के हो ? विज्ञानको आधारमा हेर्दा हर्टअट्याकको सम्बन्ध हाम्रो रगतमा हुन्छ। रगत मार्फत हाम्रो शरीरमा अक्सीजन र जरूरी पोषक तत्व पुग्छ। तर जब तपाईको हृदयसम्म अक्सीजन पुग्ने धमनिमा प्लाक जमेको कारण रुकावट पैदा हुन्छ, यस कारण मुटु धड्किने रफ्तार असन्तुलित हुन्छ। र यसबाट नै हामीलाई हर्टअट्याक आउने गर्छ। ​बाथरूममा हर्टअट्याक आउनुको पहिलो कारण: बि
Jan172021 by Raaz Lama adminNo Comments
काठमाडौं – बेसाार स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ । यो तरकालीमा हाल्दा तरकालीको स्वाद र रङमा मिठो पना आउने गर्दछ । यो एउटा कन्दमुल पनि हो ।बेसारको रङ पहेँलो हुन्छ । आयुर्वेदका रुपमा बेसार प्रयोग हुँदै आएको छ । बेसारलाई ई भिटामिन र खनिजको मुख्य स्रोतका रूपमा लिने गरिन्छ । यसर्थ, कतिपय हिन्दू संस्कारमा बेसारलाई विशेष महत्व दिई उपयोग गरिन्छ । एलर्जी, दाद, लुतो आदि छालासम्बन्धी रोगका लागि बेसार प्रभावकारी हुन्छ । बेसारको चूर्ण गहतमा मिसाएर लेप बनाई लगाउँदा छालासम्बन्धी विभिन्न समस्या निको हुन्छन् । मुख र घाँटीमा घाउ आउँदा बेसारपानीले कुल्ला गर्दा आराम मिल्छ । मधुमेहका बिरामीका लागि बेसार अचुक औषधि मानिन्छ । दैनिक अमलाको रसमा बेसार मिसाई सेवन गर्दा मधुमेहका रोगीलाई लाभ मिल्छ । पेटमा ग्यास जम्मा हुने, कफ जम्ने, खुट्टा बटारिनेजस्ता समस्या बेसारलाई नुनपानीमा
काठमाडौँ । आँखा चिलाउँदा धेरैको बानी हुन्छ हातले मिच्ने । हातले मिच्दा आँखा चिलाउने मात्र हैन, आँखा रातो समेत हुने गर्छ । अझ हात फोहोर छ भने त त्यसले आँखामा विभिन्न किसिमका संक्रमण निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले त चिकित्सकहरू सकेसम्म आँखा नमिच्न, हात नलगाउन तथा नकन्याउन सुझाव दिने गर्छन् । त्यो सुझावलाई हामी मनन पनि गर्छौं । तैपनि कहिलेकाही धुलोधूवाँ, प्रदूषण तथा विभिन्न एलर्जीका कारण आँखा यसरी चिलाउँछ कि हाम्रो हात स्वतः आँखामा पुग्ने गर्छ । परिणामस्वरूप आँखा पोल्ने, आँखा रातो हुने तथा आँखा सुन्निने गर्दछ । यी लक्षण देखिएमा हुनसक्छ आँखामा समस्या १ . आँखा रातो हुने : यो सबभन्दा सामान्य लक्षण हो । यो आँखामा श्वेतपटल, इपिस्क्लेरा र सिलियरी रक्तनलीहरुको तातोपन र रातोपन हुन्छ । यो संक्रमण पोल्ने, सूजन, चोटपटक, ट्युमर आँखाभित्रको चाप बढेमा हुन्छ । २. दुखाई : आँखामा चोट पटक, रसायपिक या
काठमाडौँ । नेपालमा पायल्सबाट पीडितको संख्या निकै ठूलो छ । तर, गोप्य अंगसँग सम्वन्धित भएकाले धेरैले यो रोग लुकाएर पनि बसेका छन्।पाइल्सको समस्या विशेषगरी गर्भावस्था, खानपानमा गडबडी, कब्जियत वा दिशा गर्दा बढि जोड लगाउनाले हुने गर्छ। पायल्सलाई अंग्रेजीमा हेमाराइड पनि भनिन्छ।मलद्धारमा रहेको भेरिकोज नलीमा दबाब परेमा पायल्स हुने गर्छ। यस्तो दवावले उक्त नली चर्कने, फुट्ने वा त्यसमा चिरा पर्ने गर्छ। जसले गर्दा मलद्वारमा चरम पिडा हुन्छ र कतिपयमा अत्यधिक रक्तश्रावसमेत हुन्छ। सामान्य व्यक्तिमा पाइल्सले गम्भीर समस्या निम्त्याउदैन तर, रगत पातलो गर्ने औषधीको सेवन गर्नेहरुमा पाइल्सले लिभरसिरोसिसको समस्या ल्याउँछ।पाइल्सबाट छुट्कारा पाउने तथा यसलाई बल्झनबाट रोक्ने थुप्रै उपायहरु छन् । यहाँ पायल्सको उपचारका केही प्रभावकारी विधीहरुको वर्णन गर्दैछौं। पायल्सको उपचार,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
Jan162021 by Raaz Lama adminNo Comments
काठमाडौँ । पेटको अल्सर भएमा पेटमा प्वाल पर्ने वा घाउ हुने गर्छ। यस्तो अल्सर विशेषगरी गलत खानपानका कारण हुने हो।सामान्यतया, खाना पचाउने एसिडले आमाशयको पर्खाललाई असर गरेमा अल्सर हुने गर्छ। यस्तो अल्सर पेटको भित्री भागमा, भोजन नली तथा सानो आन्द्रामा विकास हुन्छ।पेटमा अल्सर भएमा पिडा नाइटोबाट सुरु भई छातीसम्म दुख्छ। समयमै उपचार नगरे यसले भयानक समस्या निम्त्याउन सक्छ। र, पेट सम्बन्धि अन्य समस्याहरु पनि उब्जिन्छन्।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,, किन हुन्छ ?पेटको अल्सरलाई पेप्टिक वा ग्यास्ट्रिक अल्सरसमेत भनिन्छ। अम्लीयपना, धुमपान वा लागूऔषधको सेवन, अत्यधिक स्टेराइडको प्रयोग, आणुवंशिक कारण, तनाव तथा खानपानको गडबडीका कारण पनि पेटमा अल्सर हुने गर्छ। त्यस्तै, हेलिकोव्याक्टर पाइलोरी नामक जीवाणुको संक्रमणका कारण पनि पेटमा अल्सर हुने गर्छ। कसरी थाहा पाउने ?सुरुवाती चरणमा अल्सर पत्ता लगाउन क
काठमाडौँ । क्यान्सरका थुपै कारण हुन सक्छन्, तर सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको हाम्रो जीवनशैली र खानपिन नै हो । त्यसैले यसबाट बच्नका लागि आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ।जिवित रहँदासम्म हाम्रो शरीरमा जीवन सम्वन्धी कयौं क्रियाहरु चलिरहन्छन्। यसैमध्ये एउटा क्रिया कोशिकाहरु अर्थात् सेल्स बन्नु हो।यो क्रियामा शरीरका पुराना र मृत कोशिकाहरु आफै नष्ट भइरहन्छन् तर तिनको स्थानमा नयाँ कोशिकाहरु बनिरहन्छन् । यो प्रक्रिया हाम्रो शरीरमा सँधै चलिरहन्छ।तर, क्यान्सर भएको अवस्थामा शरीरमा रेड ब्लड सेल्स र ह्वाइट ब्लड सेल्स अनावश्यकरुपमा बढ्न थाल्छ। यी क्यान्सरका कोशिकाहरु बिस्तारै-बिस्तारै शरीरमा फैलिन्छन् र स्वस्थ कोशिकाहरुको काममा पनि बाधा पुग्छ। यीनै रोगी कोशिकालाई क्यान्सर भनिन्छ।हाम्रो शरीरमा पनि कम्प्युटरमा जस्तै धेरै प्रकारका कोडिङ हुन्छन्, जुन जिनको माध्यमबाट हाम्रो बुवाआमाद्वारा हाम्रो शरीरमा आउँछन्।चु
यी पाँच गल्तीले हुनसक्छ कलेजाको क्यान्सर, यस्ता संकेत देखिए रहनुहोस् अलर्ट
काठमाडौँ । कलेजको क्यान्सर हुने जोखिम धेरैलाई हुन्छ। खासगरी अस्वस्थ्यकर जीवनशैली अपनाउनेमा यस्तो जोखिम बढी हुन्छ।यद्यपी कलेजोको क्यान्सरको कारण यो मात्र एक कारण होइन, हाम्रा कतिपय गल्तीले कलेजोमा क्यान्सर हुन सक्छ।के हो कलेजो ?कलेजो हाम्रो शरीरको सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक अंग हो । कति बयस्कमा यसको लम्बाई १५ सेमी (लगभग ६ इन्च) हुन्छ।यो नै शरीरको सबैभन्दा गहु्रँगो अंग पनि हो, जसको तौल सावा किलोदेखि डेढ किलोसम्म हुन्छ। यो हाम्रो पेटको दाहिने भागमा हुन्छ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,, के काम गर्छ ?यसले शरीरमा ५ सयभन्दा बढी काम गर्छ । यसको मूख्य काम चाहि पाचन नलीबाट आउने रगतलाई शुद्धिकरण गरेर पुरै शरीरमा संचार गराउने हो।रगतलाई शक्तिमा बदल्ने काम पनि कलेजोले गर्छ।हामी जे औषधी सेवन गर्छौ, त्यसलाई पनि यसैले शरीरमा संचार गराइदिन्छ। तर, यति महत्वपूर्ण कलेजोलाई कसरी रक्षा गर्ने भन्ने कुरामा हा
के मुख र जिभ्रोमा खटिरा आएर हैरान हुनुहुन्छ ? हुनसक्छ यस्तो रोगको लक्षण
काठमाडौँ । कब्जियतका कारण, दाँतले जिभ्रो टोकिँदा वा अन्य कुनै पनि कारणले गर्दा मुख र जिभ्रोमा खटिरा आउन सक्छ । मुखमा खटिरा आउँदा खान पिउन र निल्न असाध्यै गाह्रो हुन्छ । यो समस्याले ग्रस्त हुनुहुन्छ भने पनि नआत्तिनुस् । यसको घरेलु उपचार सम्भव छ । लिकोरिस वा मुलेठी मुलेठीको काँढा बनाएर चिस्याउनुस् अनि कपडा वा चियादानीले छान्नुस् । अनि यसको पानीले दिनमा तीनचारचोटि कुल्ला गर्नुस् । मुख र जिभ्रोका खटिरा हराउँछन् । घिउकुमारी घिउकुमारीको रस खटिरामा लगाउँदा पीडाबाट छिटो मुक्ति पाइन्छ अनि खटिरा पनि छिट्टै निको हुन्छ । नरिवल पानी नरिवलको पानीले पनि खटिरा ठीक पार्छ । हरियो धनियाको रस धनियालाई पानीमा उमाल्नुस् । अनि त्यसको पानी छानेर चिस्याउनुस् र कुल्ला गर्नुस् । खटिरा गायब भइहाल्छन् । मह महलाई पानीमा मिसाएर कुल्ला गर्दा पनि खटिरा हराउँछन् । अलैंची चूर्ण अलैंचीको धूलोलाई
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (61889)
आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं… (50967)
काठमाडौंमा डेरा गरेर बस्नेहरुको लागी आयो यस्तो खबर ! (44757)
नवराज-शुष्मा प्रकरण : नवराजकी प्रेमीका शुष्माले पहिलोपटक मुख खोलीन् (36186)
लकडाउनकै बीच भर्खरै यस्तो घोषणा, जनताको जीवनका लागि यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई (भिडियो सहित्) (29158)